iPhone SMS Export - ndabere gị iPhone SMS on Mac / Windows PC
> Resource> iPhone> Olee mbupụ SMS si iPhone
Chọrọ mbupụ ozi site na gị iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS iji nweta ma na-agụ ya na gị na Mac ma ọ bụ Windows PC? Ị na-abịa nri ebe. Isiokwu a ga-eje ije gị site otú mbupụ iPhone SMS maka nkwado ndabere na mpaghara na kọmputa gị.
Ichekwa ndabere iPhone ozi ederede bụ ezigbo mfe. Ị na mkpa na-agba ọsọ iTunes, jikọọ gị iPhone na nri pịa ngwaọrụ aha ndabere. Ma, nsogbu bụ mgbe ị na-ahụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, ị nwere ike ịnweta ma ọ bụ na-agụ ya, ka naanị wepụ ihe SMS n'ime ya.
Iji idozi nke, ị nwere ike na-atụgharị abụọ iPhone SMS exporting omume maka enyemaka. Otu usoro ihe omume bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows), nke na-enyere wepụ SMS si iPhone ndabere na ka ị ịnweta ma na-agụ ya mfe. Ndị ọzọ bụ Wondershare TunesGo (Windows). Ọ na-ahapụ gị mbupụ iPhone SMS, MMS na iMessages dị ka ihe HTML, TXT ma ọ bụ XML faịlụ ka Windows PC.
Ngwọta 1: Export SMS si iPhone na Dr.Fone maka iOS
Ngwọta 2: Export / ndabere SMS si iPhone na TunesGo
Ngwọta 1: Export iPhone SMS na Wondershare Dr.Fone maka iOS
Download nri version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS, dị ka gị usoro chọrọ, ma na-agbalị ya maka free!
Nzọụkwụ 1. Họrọ gị iPhone ndabere ka wepụ ya
Ebe a, ka na-Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) ihe atụ. Windows ọrụ nwere ike iji Wondershare Dr.Fone maka iOS na-yiri nzọụkwụ.
Mgbe nbudata na na na wụnye usoro ihe omume, na-agba ya na kọmputa gị. Mgbe ahụ, ị nwere ike họrọ mgbake mode ị chọrọ iji. N'ebe a, anyị na-agbalị na naputa site na iTunes ndabere faịlụ mode.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị chọrọ kpọmkwem iṅomi gị iPhone na-ozi na ya, i kwesịrị jikọọ gị iPhone na kọmputa ma họrọ nke abụọ mgbake mode: naputa site na iOS Ngwaọrụ.
Ebe a, niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị ga-akpaghị aka depụtara maka gị. Họrọ ndabere gị iPhone na-anọgide na site na ịpị Malite iṅomi, wepụ ọdịnaya.
Nzọụkwụ 2. Preview na mbupụ SMS si iPhone
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu niile ozi ederede otu otu. Lelee Ozi nhọrọ na ekpe item ndepụta mbupụ iPhone SMS gị Mac. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji lelee na mgbasa ozi ọdịnaya mmasị na ozi gị, pịa Ozi Attachements n'okpuru Ozi.
The SMS faịlụ na ị na exported si ndabere bụ ihe HTML faịlụ. Ị nwere ike ịnweta ma jikwaa ọ conveniently, dị ka ịgụ, obibi, wdg Ọ bụrụ na ị na-eji Wondershare Dr.Fone maka iOS, ị nwekwara ike mbupụ ozi usoro nke CSV, na mgbe mbubata ya na gị na iPhone na a kwesịrị ekwesị transfer ngwá ọrụ . Ọzọkwa, Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows & Mac) ike ka ị na ozugbo iṅomi ma naghachi ozi site na iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 na iPhone 3GS.
Download TunesGo na kọmputa gị. Ike iṅomi mfe nzọụkwụ n'okpuru.
Wụnye ans mgbe ahụ na-agba ọsọ TunesGo na kọmputa. Mgbe ahụ, na-eji eriri USB na-eme ka njikọ dị n'etiti gị iPhone na kọmputa. Nke a software ga-amata gị iPhone. Na, na, ọ ga-egosi gị iPhone ya Ama na priamry window.
Nzọụkwụ 2. iPhone SMS exporting
Gaa SMS na ekpe kọlụm. Nke a na-ahụ SMS window, na nke ozi niile na-e. Ego igbe n'ihu gị chọrọ MMS, SMS na iMessages. Mgbe ahụ, pịa Mbupụ na n'elu akara.
Na ndọpụta ndepụta, họrọ Export Họrọ Ozi ma ọ bụ mbupụ niile Ozi, dị ka gị nhọrọ. Mgbe ahụ, nke abụọ ndọpụta ndepụta egosi. Chọta a zọpụta ụdị si ka TXT File, ka HTML File na ka XML File. Zọpụta ozi na kọmputa gị.
Gbalịa TunesGo mbupụ bupu iPhone SMS.
Olee otú Wepụ Ndi ana-akpo si iPhone ndabere
Kasị Ẹbụp iPhone akpọ Nsogbu, na otú e si edozi Ha?